Abavelisi boomatshini be-extruder - i-china i-extruder oomatshini ababoneleli kunye nefektri
Umgca wefilimu omnye / omninzi weLayer Co-Extruder
Le SINGLE / MULTI-LAYER CO-EXTRUDER CAST EMBOSSED FILM line yenzelwe ukuvelisa umboniso wefilimu, i-backshet yezinto ezisempilweni nge-LLDPE, LDPE, HDPE kunye ne-EVA
LQ-LΦ 65/110/65 × 2350 CPE (EVA) iyunithi yokuphosa ibakala eliphezulu
Le LQ-LΦ 65/1165 / 65 × 2350 CPE (EVA) iyunithi unit eyahlulayo grade eliphezulu umatshini eyahlulayo nge plasticization eliphezulu, ukusebenza lula, ubomi inkonzo ende, ugcino umbane kunye nobunye ubuchwepheshe langaphandle, kunye LDPE, LLDPE, iHDPE kunye I-EVA njalo njalo kwisiseko seminyaka emininzi yezixhobo zokusebenza kunye nokusebenza kwabathengi.
I-LQ-80/120/80/23 × 2350 isantya esiphezulu ngokuzenzekelayo umaleko amathathu okanye iileya ezintlanu ezilahliweyo kumatshini wefilimu enesixhobo esisezantsi
Umthamo ophezulu: isantya se-350 M / min; isivuno esiphezulu ukuya kuthi ga kwi-12T / ngosuku.
Ingqondo ephezulu: Umdibaniso womdibaniso womatshini womntu, ukujonga ngenkonzo ekhawulezileyo ngombane, inkqubo yolawulo olukrelekrele ngakumbi.
Umgangatho ophezulu: ii-axis ezine zomthamo, ukuqhuba kwe-servo, ukuphuma komgangatho wemveliso egqityiweyo ephezulu, encangathi, eyolulayo, yokumelana okungcono.
Ukusetyenziswa kwamandla asezantsi: inkqubo ekhethekileyo yokufakelwa kwamandla okusetyenziswa kwamandla, ukunciphisa okukhulu ukusetyenziswa kwamandla.
Kulula ukusebenza: ukusebenza komntu omnye, isantya esingundoqo, imodyuli yokulawula ubushushu
LQB-3 Amanyathelo amabini asebenza ngokuGcweleyo ngokuzenzekelayo kuMatshini wokuBumba
Inkqubo ye- Amanyathelo-amabini Multi-ezisebenzayo oluzenzekelayo Umatshini Blow Ukubumbela isebenzisa ujongano lomntu-computer ukulawula zonke iinkqubo zokusebenza, auto-ukulayisha, auto uvuthuza, auto eyehla. Iisilinda zesenzo zonke zidityaniswe notshintsho lokungenisa uzibuthe Qhagamshela ne-PLC ukulawula onke amanyathelo nokuvavanya isilinda ngasinye.
LQAL-2 Blow Umatshini Ukubumbela
LQ AS Inaliti-wolule-umatshini wokubumba
Imodeli yoluhlu lwe-AS isebenzisa ulwakhiwo lwezikhululo ezintathu kwaye kufanelekile ukuvelisa izikhongozeli zeplastiki ezinje ngePET, iPETG, njl. Isetyenziswa ikakhulu kwizikhongozeli zokupakisha izithambiso, amayeza, njl.
LQ10D-560 Blow Ukubumbela Oomatshini
UPG Blow Ukubumbela Matshini isekelwe ekubaleni ngokuchanekileyo uyilo imbaleki die, nto leyo lula, akukho engile efileyo kwaye ukutshintsha umbala ngokukhawuleza